विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको शव उठाउन सकस, चार दिनमा उठाइयो शव – Dainik Sangalo
विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको शव उठाउन सकस, चार दिनमा उठाइयो शव
August 29, 2020 211
मोरङ – मोरङको विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको शव उठाउन सकस परेको छ ।
न्यूरो अस्पतालबाट कोरोना संक्रमितको शव चार दिनपछि बल्लतल्ल व्यवस्थापन भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । मंगलबार मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितको शनिबार स्थानीय प्रशासनले शव उठाएको अस्पतालका निर्देशक ईञ्जिनियर रञ्जित राज बस्नेतले जानकारी दिए ।
आफन्त र परिवारका सदस्य सम्पर्कमा नआउँदा र महोत्तरी प्रशासनले चासो नदिँदा मंगलबार राति ११ बजेतिर मृत्यु भएका ६१ वर्षीय पुरुषको शव अस्पतालमा अलपत्र परेको थियो ।
बस्नेतका अनुसार कुरुवाका रुपमा अस्पतालमा रहेका ती व्यक्तिका छोरा पनि संक्रमितको मृत्यु भएपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
परीवारका सदस्यले नै चासो नदेखाएपछि स्थानीय प्रशासनले नै एम्बुलेन्स खोजेर शव महोत्तरी पठाउने व्यवस्था मिलाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले जानकारी दिए ।
एम्बुलेन्समा शव न्युरो अस्पतालकै कोभिड–१९ मेनेजमेन्ट एण्ड रेस्पोन्स टिमका सदस्यले राखिदिएका थिए । वृद्धको उपचारका क्रममा लागेको अस्पतालतर्फको दुई लाख २५ हजार र फार्मेसीतर्फको ७० हजार रुपैयाँ पनि छुट गरिएको अस्पतालका निर्देशक ई. बस्नेतले जानकारी दिए ।
टाउकाको नसा सुकेर प्यारालाईसिस भएका पुरुषलाई साउन ३१ गते अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो । कोरोनाको आंशकामा उनको भदौ ३ गते स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गराउँदा ७ गते रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उनको उपचारकै क्रममा गत मंगलबार मृत्यु भएको थियो ।
Prevलकडाउनमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने हजार सवारीसाधन कारबाहीमा
Nextगस्तीमा निस्केका बेला प्रहरी हबलदारको यसरि भयो दु:खद अन्त्य
Breaking News !! संखुवासभामा विप्लव समूहका कार्यकर्ता र प्रहरी’बीच गो’x ली हा’ ना हा, न